Sharikadda iska leh Inter Milan oo sidoo kale doonaysa inay Fininvest ku cariiriso xuquuqda ciyaaraha Talyaaniga! – Gool FM
Sharikadda iska leh Inter Milan oo sidoo kale doonaysa inay Fininvest ku cariiriso xuquuqda ciyaaraha Talyaaniga!
(Milano) 20 Nof 2016 – Sida uu werinayo Tuttosport waloow uusan weli soo afjarmin heshiiska ay AC Milan kula wareegeyso dallad Chinese ah, Chinese-ka Inter ayaa durba kasii fikiraya inay Fininvest ku cariiriyaan xuquuqda sii daynta ciyaaraha.
Sanadihii dambe AC Milan ayuu gurbaanku gacanteeda ugu jiri jirey, waayo Mediaset oo uu leeyahay Silvio Berlusconi ayaa ah TV-ga Sky kula xafiiltami jirey ciyaaraha Talyaaniga iyo Koobka Horyaallada Yurub.
Yeelkeede, maaddaama ay AC Milan ka baxayso gacmaha sharikadda Fininvest oo ah sharikad ay leeyihiin reer Berlusconi, waxay taasi ka dhigan tahay in ay kala waydaaran doonaan Milan iyo Mediaset.
Sidaa daraadeed, sharikadda Sunning Group ayaa doonaysa inay iibsato xuquuqaha ciyaaraha Talyaaniga sida ay u iibsatey kuwa Premier League iyadoo u maraysa PPTV, oo ah garabka warbaahinta oo ay leedahay Suning.